About us - Ningbo Beilun Ngokupheleleyo Machinery Co., Ltd.
Ningbo Beilun Ngokupheleleyo Machinery.Co., Ltd.
I-GH uthotho-ngesantya esincinci-udonga umatshini okhethekileyo ngokuzimeleyo oveliswe ngu-Ningbo Beilun Ngokupheleleyo Machinery.Co., Ltd, idibanisa isiphelo solawulo lwetekhnoloji evela eJapan, eJamani, e-Italiya nakwamanye amazwe, isaphula uninzi lweengxaki zobuchwephesha. Umzimba ophambili kumatshini wokubumba wenaliti usebenzisa uxinzelelo oluphezulu, ukuchaneka okuphezulu, inkqubo yolawulo lwe-servo ephezulu yokuphendula ukuqinisekisa ukuba umsebenzi ngamnye unxibelelana ngokufanelekileyo kwaye ugcina umbane. Inkqubo yenaliti yamkela uyilo lwamva lwesekethe yeoyile ephinda-phindeneyo. Uxinzelelo lwenaliti lufikelela kwi-23Mpa yangaphakathi, isantya senaliti sinokufikelela500mm/ umzuzwana, kwaye isantya esiphezulu senaliti sinokufikelelwa kwimizuzwana eyi-0.06. Uyilo lwendlela yokubotshwa kunye nesakhelo sisebenzisa itekhnoloji ye-3D kunye ne-FEM yohlalutyo lwamandla, eyenzelwe ukusebenza ngesantya esiphezulu, ukwandisa isantya sokusebenza kunye nokuqinisekisa ukuba ukuchaneka okuphindayo kokuvula ukungunda kunye nokubotshwa kulawulwa ngaphakathi kuluhlu lwe-0.5mm, ethi uyakwazi ukuhlangabezana ngesantya esiphezulu inkqubo-elibhityileyo-udonga inkqubo iimfuno zomatshini ziphene yokubumba ukwenza imveliso uzinze.
Kwimitshini ye-FL, sinokuqonda okupheleleyo kweemfuno zabathengi kwindawo eguqukayo yetekhnoloji.
Iinjineli zethu zihlala zizama ukubonelela abathengi bethu ngezisombululo abazidingayo ukuze bahlale phambili kukhuphiswano.
Oomatshini be-FL baqinisekisa umgangatho wemveliso ngokusebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu ukusuka IYurophu, i-USA, Japhan, kunye ETaiwan. Ngokusebenzisa uyilo lwesoftware oluphambili lwe-3-D, iinjineli zethu zize noomatshini abatsha nabaphambili abadibanisa iitekhnoloji zangoku zomatshini, zombane kunye nezobuchwephesha kumatshini omnye, ukuvelisa oomatshini beplastikhi abasebenza ngokukuko kunye nokusebenza kakuhle.
Umatshini we-FL ngowona mgangatho uphezulu, onobungqongqo obuphezulu, amandla okusika awomeleleyo kunye noxinzelelo oluphezulu lwenaliti kunye nokuchaneka okuphezulu. Umatshini wethu waziwa kakuhle kubathengi ngokuzinza kwabo, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kunye nokuthembeka.
Thina FL Oomatshini bayakwamkela kunye neengcebiso zakho ezixabisekileyo zokuphucula kwethu okuqhubekayo kunye nozinzo.
OOMATSHINI NGOKUPHELELEYO kukuthenjwa, ukuhlala ixesha elide, ukusebenza ngokukuko, ukonga umbane, ukuchaneka okuphezulu, umxholo woyilo lokhuselo lokusingqongileyo, kudityaniswe neJapan, iJamani, i-Itali kunye namanye amazwe obuchwephesha bokulawula isiphelo, kwiimfuno ezahlukeneyo zasekhaya nezangaphandle abathengi abatsha nabadala ngezisombululo zokubumba inaliti kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo.
Iimpawu eziPhezulu zokuThumela ngaphandle: eMntla Melika, eNtshona Yurophu, eMpuma Yurophu, eMzantsi Melika, kuMazantsi mpuma eAsia, eMpuma Asia, eMid East, eOceania, eAfrika
Precision zeplastiki ziphene ziphene yokubumba, Precision Inaliti Ukubumbela Inc., Thin Wall Inaliti Ukubumbela Machine, Inaliti ngqo, Precision Inaliti Ukubumbela, Ukubumbela Precision,